स्वास्थ्य-जीवनशैली – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
अनसनरत डा.केसीले काठमाडौंमा पनि उपचार लिन मानेन् ५ श्रावण २०७५, शनिबार १२:२५
काठमाडौँ, ५ साउन । अनसनरत डा.गोविन्द केसीले कुनै पनि किसिमका स्वास्थ्य जाँच र सुविधा लिन अस्वीकार गरेका छन्। डा.केसीको कर्णालीमा रहँदैदेखि मुटुको चालमा गम्भीर गढबढी देखिएको थियो। तर, उनको अडानकाका कारण इसिजी गरेर मुटुको अवस्था बारे जानकारी लिन..
काठमाडौं, ५ साउन । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी २१ दिनदेखि अनसनरत प्राडा गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म थप उपचार नलिने अडान राख्नुभएको छ । ‘सरकारले आफुलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लगेर उपचार गरी माग पनि पुरा गर्ने बताएर काठमाडौँ..
क्यान्सर अस्पताल चितवनका अस्थायी कर्मचारी आन्दोलित ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार २३:१३
चितवन, साउन ४ । चितवनको बी. पी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अस्थायी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले स्थायी गर्नुपर्ने, राजनीतिक भर्तिकेन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने लगायतका माग राखेर आन्दोलन सुरु..
भरतपुर आंँखा अस्पताललाई पांँचसय थान चस्मा सहयोग
चितवन,४ साउन । क्यानडाको टोरण्टो शहरस्थित लिसाइड सेन्टिनियल लायन्स क्लबले भरतपुर आंँखा अस्पताललाई ५०० थान चस्मा सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ । अस्पतालमा आज आयोजित कार्यक्रममा क्लबका संस्थापक अध्यक्ष डा तुलसी धरेलले नेपाल नेत्रज्योति संघका..
डा. केसीलाई जुम्लादेखि हेलिकोप्टरबाट ल्याउन किन ३ घण्टा २० मिनेट लाग्यो
काठमाडौं, ४ साउन । २० दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनसन बस्नुभएका प्रा।डा।गोविन्द केसीलाई सरकारले बिहीबार सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याइएको छ । डा। केसीलाई यातना दिने मनसायले हेलिकोप्टरमा ३ घण्टा २० मिनेट..
जुम्लामा अनसनरत डा.केसी काठमाडौं फर्किए,डा केसीलाई लिएर सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौं प्रस्थान ३ श्रावण २०७५, बिहीबार १५:२२
काठमाडौं,३ साउन । २० दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा गोविन्द केसी काठमाडौं फर्किएका छन्। निरन्तर उनकै साथमा रहेका विशद दाहालले डा केसीलाई लिएर सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौं प्रस्थान गरेको जानकारी दिए। उनलाई काठमाडौं ल्याउनका सेनाको हेलिकप्टर..
चितवनमा आँखाको तालीम केन्द्र निर्माण गरिने
चितवन, ३ साउन । नेपाल नेत्रज्योति संघ भरतपुरले यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आँखाको तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित भरतपुर हाइटमा संघको एक बिगाहा सात कट्ठा जग्गामा तालीम केन्द्र बनाउन लागिएको हो । विदेशबाट..
आखिर किन जुम्लामा अनसनरत डा.केसी काठमाडौं जान तयार भए?
जुम्ला,३ साउन । जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी काठमाडौं जान सहमत भएका छन् । बिहिबार प्रहरीले आफ्ना समर्थकमाथि बलप्रयोग गरेपछि डा. केसी आफैं काठमाडौं जान तयार भएका हुन् । उनलाई लिन हेलिकप्टरसहित गएको सरकारी टोलीलाई स्थानीयले अनशनस्थलमा..
डा केसीलाई काठमाडौँ लैजान समर्थकहरु बाधक,मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत अस्पताल प्रवेश गर्न दिइएन
जुम्ला, ३ साउन । अनसनरत डा गोविन्द केसीका समर्थकहरु प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । अहिले अनसन बसिरहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ । बिहिबार केसीलार्इ काठमाडौं ल्याउन जुम्लामा हेलिकोप्टर पुगेपछि प्रहरीलाई..
डा केसीलाई लिन हेलिकोप्टर जुम्ला पठाइयो
काठमाडौँ, ३ साउन । बीस दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउन सरकारले आज बिहान हेलिकोप्टर पठाएको छ । उहाँको जीवनरक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौँ..